Semalt विशेषज्ञ: कसरी स्पाम मेलहरू प्रबन्ध गर्ने?
प्रासंगिक अधिकारीहरूलाई स्क्याम मेल रिपोर्ट गर्नु ठगी गर्नेहरूलाई बाधा पुर्‍याउने र अपराधको विकासलाई रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो। बेलायतमा, नेशनल फ्रड इंटेलिजेंस ब्यूरोले मेल घोटालाहरू र यस्तै अपराध जस्ता डेटा जम्मा गर्न र विश्लेषण गर्न कार्य गर्दछ। यसले विशेष गरी निवारक कार्यहरू बारे निर्णय लिने सूचना दिन मद्दत गर्दछ।
रेयान जॉनसन, Semalt को वरिष्ठ बिक्री प्रबन्धक द्वारा प्रदान सुझावहरु तल जानुहोस् , जो घोटाला पत्र को बारे मा के गर्ने थाहा छ।
स्क्याम मेल रिपोर्ट गर्दै
तपाई प्रासंगिक अधिकारीहरुलाई घोटाला पत्र को बारे मा सूचित गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले धेरै तरीकाले प्राप्त गर्नु भएको थियो। यसमा रॉयल मेल वा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नु समावेश छ जुन धोखाधडीहरूले नक्कल गरिरहेका छन्।
रॉयल मेललाई स्क्याम मेल रिपोर्ट गर्नुहोस्
रोयल मेल एक मेल र पार्सल डेलिभरी सेवा हो। यसले प्रासंगिक अधिकारीहरूसँग काम गर्दछ यदि घोटाला पत्र हुलाक प्रणालीलाई घुसपैठबाट रोक्नको लागि। यदि तपाइँ वा तपाइँले चिन्नु भएको व्यक्तिले स्क्याम मेल प्राप्त गर्दछ भने, रोयल मेलले सल्लाह गर्दछ कि तपाइँले यस ठेगानामा कभरिंग पत्रका साथ मेल अग्रेषित गर्नुभयो:
फ्रीपोस्ट स्काम मेल,
पीओ बक्स77,,
तपाईं पनि रोयल मेल कल गर्न सक्नुहुन्छ ०454545611१ 34 13 via१13 मार्फत वा ईमेल पठाउनुहोस् scam.mail@royalmail.com मा।
रोयल मेलले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई स्काम मेल रिपोर्ट पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्दछ (उनीहरूको वेबसाइटमा डाउनलोड गर्नका लागि उपलब्ध) र यसलाई धोखाधडी गर्नेहरूबाट प्राप्त भएको मेल र अन्य कागजातहरू वा सामग्रीहरू स्क्यामरहरूबाट उत्पन्न भएको शंका सहित पठाउन प्रोत्साहन गर्दछ।
घोटाला मेल रिपोर्ट गर्ने अर्को तरिका भनेको तपाईंको पूरा नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर माथिको हुलाक ठेगानामा ईमेलद्वारा वा टेलिफोन द्वारा पठाउनु हो (०4545456 ११3 41१3)। रोयल मेलले तपाईंलाई फारम र प्रिपेड ठेगाना लिफाफा पठाउँनेछ कि फारम भरिसके पछि तपाईं यसलाई प्राप्त घोटाला मेलहरूको नमूनाको साथ पठाउनुहुनेछ।
कम्पनीलाई रिपोर्ट गर्दै
यदि तपाईं एक ठगी मेल प्राप्त गर्नुहुन्छ एक वास्तविक कम्पनीको प्रतिनिधि भएको नाटक गरेर धोखाधडी गर्नेहरूबाट, कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
यो बैंक वा सरकारी विभाग हुन सक्छ जुन नक्कल गरिएको छ र घोटाला मेलमा उद्धृत गरिएको छ। उक्त संगठनलाई सूचित गर्नाले घोटालाको बारेमा अरू व्यक्तिलाई सूचित गर्न सक्दछ। केही कम्पनीहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरूमा नोटिसहरू राख्दछन् र उनीहरूले घोटालाको शिकार हुने स्थितिमा बाहिरी रूपरेखा चरणहरू लिन्छन्।
स्क्याम ईमेलहरूको बारेमा के हुन्छ?
ईमेलहरू अन्य लोकप्रिय तरिकाहरू हुन् जसमार्फत स्क्यामरहरूले मानिसहरूलाई गैरकानुनी योजनाहरूमा छल गर्छन्। यदि तपाईंले आफ्नो ईनबक्समा स्क्याम ईमेल याद गर्नुभयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले रिपोर्ट गर्नुभयो।
रिपोर्टिंग विकल्पहरू हेर्नु अघि तपाईंसँग जब तपाईं स्क्याम ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ, पहिले तपाईंलाई केही सुझावहरू समीक्षा गर्नेछौं जसले तपाईंलाई र तपाईंको जानकारीलाई सुरक्षित राख्दछ। जब तपाईं स्क्याम ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ:
ईमेलमा कुनै लिंक क्लिक नगर्नुहोस्।
ईमेललाई जवाफ नदिनुहोस् वा प्रेषकसँग कुनै पनि हिसाबले सम्पर्क नगर्नुहोस्।
तपाईले पहिले नै लिंक क्लिक गरेको भए पनि कुनै पनि जानकारी नदिनुहोस्।
ईमेलमा कुनै पनि संलग्नक नखोल्नुहोस्।
रॉयल मेललाई स्क्याम ईमेल रिपोर्ट गर्दै
शाही मेलले घोटाला ईमेलको बिरूद्ध लडाई शुरू गर्दछ सबैभन्दा प्रायः घोटाला ईमेलहरूको सूची प्रदान गरेर तपाईंलाई एक झलकमा स्क्याम ईमेलहरू भेट्टाउन मद्दत गर्न। यदि तपाइँ शंकास्पद ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ रॉयल मेल कम्पनीको सम्पर्क पृष्ठ वा साइटको वेब पृष्ठहरूको तल "" हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् "लिंक मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
ईमेल कम्पनीलाई स्क्याम ईमेल रिपोर्ट गर्दै
स्क्याम ईमेल वा फिसि email ईमेलहरू ISP (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) लाई रिपोर्ट गर्न सकिन्छ जुन ईमेल समाप्त गर्न प्रयोग गरिएको थियो। उदाहरण को लागी, यदि ईमेल जीमेल खाताबाट आएको हो, तपाई जीमेलको होमपेजमा 'रिपोर्ट स्प्याम' बटन प्रयोग गरी रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। याहूको एक ईमेल (दुरुपयोग@yahoo.com) छ जसमा स्क्याम ईमेल र सम्बन्धित अपराधहरूका बारे सूचना दिइन्छ। हटमेलले उही उद्देश्यको लागि 'रिपोर्ट फिशिंग' बटन प्रदान गरेको छ।
राम्रो समय मा स्क्याम मेल र ईमेल रिपोर्टिंग अधिक मात्रामा गर्न सकिदैन। एक समय जब घोटालाहरू दाँया, बाँया र केन्द्र हुन्छन्, एकले सबै ठीकै छ भनेर मान्न सक्दैन। जालसाजी गर्नेहरूको बिरूद्ध लडाईमा, शyn्कास्पद हुनु र मेल वा टेलिफोन कलहरूबाट सूचनाको अनुहार मूल्य विश्वास नगर्न राम्रो हुन्छ।